Mayelana NATHI - FUJIAN YUANHUA Pump Pump INDUSTRY CO., LTD
Isihlanza Amanzi RO Pump
Ipholisa Lomoya Elipholile
I-FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD
Siyi studio sokuqamba esikholelwa emandleni wedizayini enhle.
I-FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD yamiswa eFujian ngo-2009, okuyinkampani ephethwe ngokuphelele yi-PEAKTOP Group efakwe kuhlu eHong Kong (ikhodi yesitoko SEHK: HK0925). I-PEAKTOP Group yasungulwa ngo-1991, ikakhulukazi ebhekene nezipho nomsebenzi wasendlini.
Kodwa-ke manje inkampani ephethwe yi-YUANHUA ibandakanyeka kakhulu ocwaningweni nasekuthuthukiseni, ekukhiqizeni nasekuthengiseni ipompo elicwilisa amandla kagesi le-AC, ipompo lamanzi elanga le-DC, ipompo elingenamanzi le-DC njll. izimoto, imishini ejikeleza amanzi ngokuzenzakalela, imikhiqizo yelanga (umthombo wokugeza wezinyoni), amathangi ezinhlanzi zase-aquarium, imishini yokugeza ngezinyawo, umoya opholile. Ngaphezu kwalokho sengeza imikhiqizo emisha enjenge-drain pump yomshini wokuwasha kanye ne-RO pump yokuhlanza amanzi.
Inkampani yethu ithole isitifiketi se-ISO9001: 2008, futhi ilandela ngokuqinile lolu hlelo lwemenenja. Imikhiqizo ivunyelwe i-CCC, i-ETL, i-UL, i-CUL, i-CE / i-GS, i-ROHS, i-SAA njll. Engahlangabezana nezidingo zamazwe amaningi emhlabeni. Sisungule ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside futhi obuzinzile namanye amabhizinisi amakhulu asekhaya.
Sinemikhiqizo emibili i- “PEAKTOP” ne- “YUANHUA” yamaphampu ethu angaphansi. Ngeminyaka ecishe ibe ngu-20 yesipiliyoni nekhwalithi enhle kakhulu, sinedumela eliphakeme embonini. Siphinde sichazwe umphakeli womkhiqizo wamaphampu acwilikayo amaningi kakhulu aphesheya amaketanga ezitolo ezinkulu. Njalo ngesimiso sokuthi "Ikhwalithi yokuqala, Amakhasimende kuqala", sithola impendulo enhle njalo nesikweletu emakethe yaphesheya nasekhaya.
Ukuze siqhubeke nokuthuthukisa izimakethe ezintsha zomhlaba wonke, sihlanganyele kwiCanton Fair minyaka yonke futhi kwesinye isikhathi embukisweni we-Global Sources Hong Kong Electronics Show. Letha imikhiqizo emisha yenkampani ekuxhumaneni ubuso nobuso namakhasimende amasha namadala aphesheya, lalela imibono neziphakamiso zamakhasimende, futhi uthuthukise imikhiqizo ngokuqhubekayo. Ukwaneliseka kweKhasimende kuyinjongo yenkonzo yethu.
Ngaphezu kwalokho, ukuze kunothiswe isikhathi sokuphumula nenhlalakahle yabasebenzi, inkampani yethu inikeza izipho zosuku lokuzalwa namaphathi afanele ngosuku lokuzalwa lomsebenzi ngamunye. Inkampani yaseYuanhua iya kwezinye izivakashi ukuvakasha izikhathi ezingama-2-3 minyaka yonke. Ngaphambi koMkhosi Wentwasahlobo kunesidlo esikhulu sakusihlwa kanye nelotho minyaka yonke, futhi futhi kuwumcimbi waminyaka yonke wokubonga nempendulo wokuveza unyaka wonke wezimali kubasebenzi benkampani.
Ngeminyaka ecishe ibe ngu-20 yesipiliyoni nekhwalithi enhle kakhulu, sinedumela eliphakeme embonini.
- Ikhwalithi yokuqala, Amakhasimende kuqala
Ucingo:0086 595 87298199